सुजीतकुमार झा जनकपुर, २९ पुस
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा मेयरकै उपस्थितिमा पत्रकारहरूलाई कुटिएपछि नगरपालिकाको कामकाजको चारैतिर आलोचना भइरहेको छ । पत्रकारहरू आन्दोलित छन् । मेयरकै पार्टी राजपाका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वउपमेयर असगर अली के सोचिरहेका छन् ? यस विषयमा उनीसँग शिलापत्रका लागि सुजीतकुमार झाले गरेको कुराकानी:
जनकपुरधाम उपमहानरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहकै उपस्थितिमा पत्रकारहरूमाथि गरिएको कुटपिटकाे घटनालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नगरपालिकामा वा कहीँ कुटपिट घटना हुनु निन्दनीय हो । आफूलाई नगरपिता भनेर प्रचार गर्ने व्यक्तिकै अगाडि यस प्रकारको घटना हुनु लाजमर्दो हो । जनताको सुरक्षाको अनुभूति दिने ठाउँमा उत्तेजनापूर्ण कार्य अभिभावकबाट हुनु हुँदैन । यस्ता व्यक्ति अभिभावक बन्न लायक नरहेको जस्तो लागिरहेको छ ।
तपाईं स्वयम् नगरपालिकाको उप्रमुख भइसक्नुभएको छ, वडाध्यक्ष भएर काम गरिसक्नुभएको छ, किन यस्तो भएको होला, तपाईंलाई के लागिरहेको छ ?
मलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको छ । संयमताको अभावभन्दा बढी केही भन्न सक्दिनँ । लालकिशोरजी मेयर भएदेखि नै सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लिएर अगाडि बढ्न सक्नुभएको छैन । पत्रकारका पनि आफ्नै नैतिकता हुन्छन्, त्यसलाई पत्रकारहरूले पनि पालना गर्नुपर्छ ।
अहिले दुवै पक्षले आन्दोलन गरिरहेका छन्, यो आन्दोलनप्रति के भन्नुहुन्छ ?
आन्दोलनले समस्या समाधान हुँदैन । दुवै पक्ष बसेर समस्याको निकास खोज्नुपर्छ । गल्ती भएको छ । गल्ती गर्नेले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसरी सडकमा एकअर्कालाई गाली गरेर दुवै पक्षको गरिमा घट्छ । एकले अर्कोलाई तल्लो देखाउन सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सरसमेत भएको पहिलो पटक देख्दै छु ।
यो घटना मिलाउन तपाईंको पार्टी राजपाले भूमिका किन खेल्न सकिरहेको छैन ?
अवश्य । मेयरलाई राजपाले नै टिकेट दिएपछि उहाँ सो पदमा पुग्नुभएको छ । राजपाका कन्द्रीय नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । मधेश आन्दोलनमा पत्रकारहरूको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
प्रजातन्त्रको अक्सिजन नै स्वतन्त्र प्रेस रहेकाले दुवै पक्षमा कहाँ असमझदारी बढेको छ, त्यसलाई खोजी गरी समस्याको निकास दिलाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । यो विवादले राजपालाई समेत क्षति भइरहेको छ ।
तर पत्रकारहरूले महिलालाई कुटपिट गरेको भनेर जनकपुरधाम उपमहानगरका कर्मचारीले आन्दोलन शुरू गरेका छन् नि ?
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा सीसी क्यामेरा जडान छ, कसले कसलाई कुट्यो भन्ने सबै कुरा देख्न सकिन्छ । त्यो फुटेज झिकाएर प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले हेर्दा हुन्छ । यसबाट सबै थोक स्पष्ट भइहाल्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, पुस २९, २०७६, १२:०९:००
यातायात खुलाउन र रोक्न बिहीबारको ५ घण्टा, कसरी उल्टियो निर्णय?
सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
कोरोना त्रास : यस वर्ष बिस्केट जात्रा नमनाइने
बैतडीमा यसरी हुँदै छ ‘थ्रोट स्वाब’ संकलन [फोटो फिचर]